Miyuu qalabkan isweydaarsiga ah ku beddeli karaa tampons iyo nadiifinta nadaafadda? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Miyuu qalabkan isweydaarsiga ah ku beddeli karaa tampons iyo nadiifinta nadaafadda?
Naag kastaa way ogyihiin waxa "toddobaadkii gaarka ahaa" ee bisha, oo u baahan inay daryeel gaar ah u yeeshaan dharkooda iyo dharka. Inta lagu jiro caadada, waxay badanaa isticmaalaan si ay u isticmaalaan waxyaabo nadaafadeed oo kala duwan sida tampons, napkins nadaafada jirka iyo, qaar ka mid ah Koobka caadada.
Inkasta oo badeecad kasta ay ka duwan tahay, qofna ma yimaado iyada oo aan lahayn wax dhib ah. Tusaale ahaan, suunka nadaafadda ayaa badanaa ka hortagaya isticmaalka jilicsanaanta iyo jilicsanaanta ama dharka iyo dharka dharka adag. Taasi waxay tidhi, dumarka qaarkood kuma raaxaystaan ​​tampons, oo sidoo kale la illoobi karo muddo yar, dib u dhigista isbeddelkooda waxayna keeni karaan halis.
Taasi waxay tidhi, qaab cusub ayaa la soo saaray, ama halkii hore wax laga bedelay! Miyaad qiyaasi kartaa in dharkaaga aad gashan kartid dhiig-baxa inta lagu jiro xeerarka ? Waxay u eg yihiin dharka caadiga ah (inkastoo aysan aheyn xarig ama tangas), laakiin leh hanti gaar ah.
Dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dharka waxay keeneen abuurista dharka jirka oo soo jiidanaya dhiigbaxa. Waxay ku qalabeeyeen dabaq gaar ah, oo dhumucdiisuna ay ka yar tahay mid ka mid ah xirmooyinka nadaafadda caadiga ah. Awoodda sii-haynta ee dharkan waxay u dhigantaa 2 tuugo.
Публика от Julia McLellan (@juliaemilymclellan) 21 Noy 2018 ee 8: 47 PST
Fiidkii, waxaa lagu maydhan karaa gacanta ama mashiinka dharka. Haddii dhiigbaxu badan yahay, dabcan waa lagama maarmaan in la beddelo dhowr jeer maalintii. Waa adag tahay in la qiyaaso dareenka xidhashada suxuuntaas
Booqashadiisu waa (@shethinx) 21 Fev 2019 ee 4: 45 PST
Cajiibka caanka ah Mila Kunis ayuu ra'yi dhiibtay ku saabsan suufka caadada ah, oo qirtay in ay ku faraxsan tahay in khudbadaha noocan oo kale ah iyo in tani ay soo jiidato iyada. Waxaa muhiim ah in la sheego in ujeedada dharkan aysan ahayn kaliya in ay haweenka siineyso raaxo badan laakiin sidoo kale inay ka caawiso ilaalinta meeraha; sida aad hore u ogtahay, badeecadda nadaafadda haweenku waxay si aad ah uga qayb qaadataa wasakheynta deegaanka.
Booqashadiisu waa (@shethinx) 13 Noy 2018 ee 5: 01 PST
Le qiimaha celceliska ee ka mid ah dharka buunku waxay ku saabsan tahay 32 euros. Haddii aad tahay haween casri ah oo aan jeclayn qalabka nadaafadda caadiga ah ee haweenka caadiga ah, waxaad taqaanaa waxaad samaynayso!
Miyaad u maleyneysaa in badeecadani ay tahay mid waxtar leh? Fekerkaaga ku dhiibo faallooyinka!